मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई अमेरिकामा भव्य स्वागत
नेपालीहरू सधै विरोध, एकअर्काको खिचातानी गर्ने रोग परदेशमा पनि सरेको छ । त्यसको असर न्युयोर्कमा पनि पर्ने नै भयो । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन आउने क्रममा नेपाली समुदायसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त गरेनन् । किनकी न्युयोर्कस्थित नेपाली समुदायविचको आपसी खिचतानी र सम्बन्धीत पार्टीका नेतृत्वको समन्वयको अभाव नै थियो । त्यस्तै कतिपय एउटा पार्टीको नेताको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमहरू अर्को विचार समुहका प्रतिनिधी सून्य नै हुने गर्दथ्यो । तर यसपाली त्यसो भएन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री माननीय उपेन्द्र यादव प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेको कार्यक्रम नेपाली समुदायले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको थियो । न्युयोर्कको क्वीन्समा आयोजित कार्यक्रममा नेपालबाट आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेत विशेष अथितीको रूपमा उपस्थित थिए । अमेरिकालाई कर्मभूमि बनाईरहेका नेपाली समुदायका अगुवाहरू, वैज्ञानिकहरू, प्राध्यापकहरू, डाक्टरहरू साथै विभिन्न व्यापारी व्यवसायीहरूको उपस्थितिले हल खचाखच नै थियो । यो प्रकारको कार्यक्रम खासगरेर न्युयोर्कमा नभएको धेरै भएको थियो । यसपाली भने न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दूतावास न्युयोर्क, नेपाली समाज अमेरिका, प्रवासी नेपाली एकता मन्च र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीकाको नेतृत्वविचको सहकार्यले सबै नेपाली समुदायको सिंगो साझा कार्यक्रम बन्न सफल भयो ।
न्युयोर्कमा के भने नेपाल सरकारका तीनजना मन्त्रीहरूले ?
नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवले मन्तव्यको सुरूवातमै आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत गरिरहेको कामहरूका बारेमा राखे । उनले हाल न्यूहेल्थ पोलीसी ल्याएका छौं । यसबाट प्रत्येक नागरिकलाई वेशिक हेल्थ सर्भिस निःशुल्क उपलब्ध गराउने । यसबाट प्रत्येक नागरिकले निःशुल्क प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्दछन् । यसलाई लागु गर्न प्रत्येक वडास्तरमा स्वास्थ्य चौकिहरूको अनिवार्य स्थापना गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी, तथा अस्पताल अनिवार्य । प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशिष्ट सेवा सहितको हस्पिटल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको स्थापना गर्ने तथा यसलाई जनताको स्वास्थ्य अधिकारको रूपमा लागु गर्ने बताए । उनले यो कुरा नेपालमा पहिलोपटक लागु गर्न लागिएको पनि बताए । साथै नेपालमा हाल प्रदूषणको कारण विभिन्न सरूवा रोगहरू लाग्ने गरेको र त्यसमा नेपाल सबैभन्दा जोखिम अवस्थामा रहेको समेत मन्त्री यादवले बताए । दैनिक जीवनमा हामीले नै प्रदूषण गरिरहेका छौ । हाम्रो रहन–सहन खान–पानमा सुधार ल्याउन जरूरी छ । साथै हामीले खानेकुराहरूमा लगाईएको विभिन्न अखाद्य पदार्थहरू, मिसावट, साथै विषादीहरूको प्रयोगले हामीमा, किड्नीको समस्या, मुटुको समस्या साथै क्यान्सरजस्ता खतरनाक रोगहरू लाग्ने गरेको समेत जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्री यादवले नेपालको विभिन्न स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न नेपालमा ह्युमन रिर्सोसकै सबैभन्दा अभाव रहेको भन्दै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल चार हजार सुपर स्पेसलाईज गरेको डाक्टरहरू चाहिने बताए । ‘तर, हामीसँग सात सयको हाराहारीमा त्यस्ता स्पेसलाईज छन् । हामीलाई तत्काल ८० हजार नर्सहरु तत्काल चाहिन्छ । तर, हामीसँग १३ हजारले काम चलाईरहेका छौ । हामीलाई तत्काल १२ हजार जना मेडिकल अफिसरहरू चाहिन्छ तर हामीसँग ११– १२ सय छन् , त्यतिले जसोतसो काम चलाईरहेका छौ ।’ मन्त्री यादवले भने ।
त्यसैगरी उनले नेपालको संविधान अपुरो रहेकोले त्यसलाई शंसोधन गर्नेुपर्ने बताए । उनले नेपालको विकास र समृद्दिको लागी मुख्यकुरा राजनीति निकास नै रहेको बताए ।
‘मुख्यकुरा राजनीतिक निकास हो । जुनवेला संविधानको घोषणा भयो त्यसवेला पनि तीनसय भन्दा बढी सुझावहरू विभिन्न ठाउँबाट आएर संविधान सभामा दर्ता भएका थिए । तर, त्यसलाई छलफल नै नगरी संविधान हतारमा खै कता ड्राफ्ट गरेर ल्याउनुभयो । यो संविधानमा सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरू धेरै छुटेको र धेरै त्रुटीहरू छन् । कतिपय धारा हरूनै प्रिन्ट नै छैन जसको तल व्याख्या गरिएको छ । तर यो संविधानको मुल कुरा नै परिवर्तन गर्नु जरूरी छ,’ उनले भने, ‘त्यो हो शासकीय स्वरूप, हालको राज्यको शासकीय स्वरूपले नै विकास र सम्मृ्द्दी गर्न दिदैन । कतिपय कुरा यो संविधानमा राम्रो पनि रहेकोले यो संविधानलाई बचाएर लैजानुपर्ने छ । ‘केही राम्रो पक्षहरू पनि छन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता जस्तै ऐतिहासिक उपलव्धीहरू हामीले यो संविधानमार्फत् प्राप्त गरेका छौ । जुन कुरा अहिलेसम्म नेपालीहरूले प्राप्त गर्न झण्डै ७० बर्ष लाग्यो ।’
मन्त्री यादवले यो संविधानले संसारकै उत्कृष्ट मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको समेत बताए । ‘मौलिकहकहरू पनि विश्वको धेरै संविधानहरू भन्दा राम्रो छ । तर, त्यो संविधानमा मात्र सिमित छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको अर्को चुनौती छ ।’ मन्त्री यादवले भने, ‘अब प्राप्त उपलव्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै, संविधानलाई संशोधन गर्दै जानुको विकल्प छैन । किनकी अझै पनि पुरातनवादीहरूले गणतन्त्रलाई धरासायीमा पार्ने खतरा छ । त्यसैले हामीले अन्य वाटोहरूलाई छोडेर मुलुकलाई निकास दिन हामीले यो सरकारलाई साथ दिन आएका छौ ।’ उहाँले संविधान संशोधनकै लागी आफूहरू सरकारमा आएको वताए । तत्कालीन एमाले र नेकपा केन्द्रसँग सहमती गरेर दुई तिहाई पुगेपछी संविधान संशोधन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामी सरकारमा छौ ।’
नेपाली राजनीतिमा संघियताको प्रस्ताव ल्याउने र संघीयताको लागी नै मधेश विद्रोहको नेतृत्वकर्ता साथै संघीयताको प्रवर्तक मानिएका उपेन्द्र यादवले संघियताको मूलमर्म विपरीत यो संविधान रहेको वताए । ‘संघीयताको मूलमर्म विपरीत यो सुविधानमा साशकिय स्वरूप रहेको छ । संघीयतामा प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय निकायहरू रहन्छन् । त्यसकारण कामगर्ने तरिका मिलिरहेको छैन । प्रदेश सरकारलाई स्थानीयले टेरिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थानिय निकायहरूमा आफ्नो काम गर्न सकेको छैनन् । किनकी विभिन्न संवैधानिक, कानुनी बाधाहरू छन् ।’ साथै उनले एकअर्को प्रसंगमा नेपालीहरू नेपाल भन्दा बाहिर धेरै योग्य सक्षम रहेको र त्यसलाई नेपाल भित्राउनु पर्ने बताए ।
‘तपाईहरू संसारभरी छरिएर रहेका योग्य जनताहरूलाई अब नेपाल फर्केका काम गर्न अनुरोध गर्दछु । तर त्यसको लागि सरकार तयार हुनुपर्दछ । जसरी, कोरिया, जापान, चीन जस्ता मुलुकहरूले युरोप, अमेरिका लगायतमा रहेका वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, प्राद्यापकहरूलाई सोही देशमा जुन सेवा सुविधा पाएका छन् । त्यति नै मात्रामा राज्यले सुविधा दिएर आफ्नो देश फर्काएका थिए । नेपालले पनि अब त्यसै गर्नुपर्दछ । हामी त्यो पोलेसी बनाउदै छौ ।’ यसरी योग्य सक्षमहरू देश फर्कीनु देशको विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक रहेको वताए ।
सोहि अवसरमा नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तीबहादुर वस्नेत पनि सहभागी रहेका थिए ।
उक्त भेलामा कार्यक्रमको मध्यतिर मात्र आईपुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अहिले विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका मानहानुभावहरूलाई नेपालको विकास र सम्मृद्दिको पक्षमा प्रयोग गरिदिन पनि अनुरोध गरेका थिए । साथै, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ती बहादुर वस्नेतले नेपालको संविधान हामीले सोचेजस्तो बनाउन नसकेता पनि यसको राम्रो पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधान संशोधन गर्दै लानु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी कार्यक्रमको सभापतिमा नेपाली समाज अमेरिकाका अध्यक्ष समिर महर्जनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रवासी नेपाली एकता मन्च अमेरीका केन्द्रीय एकता कार्यदल सदस्य यम लामाको स्वागत मन्तव्य राखेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रानामगर, नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष आनन्द विष्टको शुभकामना मन्तव्य रहेको थियो । साथै विषय विज्ञहरू प्रोफेसर, वैज्ञानिक डा. रूद्र अर्याल, डा. विनोद शाह र डा. कृष्ण खनालले स्वास्थ्य शिक्षा तथा वन तथा वातावरणको विषयमा विशेष प्रस्तुति गरे । नेपाली समाज अमेरीकाका महासचिव लोक चेम्जोङले कार्यक्रम सन्चालन गरेका थिए भने विषय विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रिया नेपाली महावाणिज्यदूतावास न्युयोर्कका महावाणिज्यदूत पुष्प भट्टाराईले सहजिकरण गराए ।
सोहि अवसरमा महावाणिज्यदूत पुष्पराज भट्टराईले मन्त्री यादवको कार्यक्रममा सौहाद्ररुपमा सम्पन्न गर्न सफल भएको बताए ।
नेपाली समाज अमेरिकाका अध्यक्ष समिर महर्जन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लिला राई, महासचिव लोक चेम्जोङ, सदस्य केशवराम राई तथा प्रवासी नेपाली एकता मन्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टेक गुरूङ, महासचिव राधाकृष्ण देउजा, एकता कार्यदलका सदस्य याम लामा र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीकाका अध्यक्ष मानबहादुर रानामगर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार विष्ट तथा महासचिव प्रेम गुरूङको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो ।